सधैं रुवाउँछन् कुशल बेल्बासे ले ,फेरि गाए शर्मिला गुरुङ संग यस्तो मार्मिक गीत (भिडियो सहित) | मनोरंजों
सधैं रुवाउँछन् कुशल बेल्बासे ले ,फेरि गाए शर्मिला गुरुङ संग यस्तो मार्मिक गीत (भिडियो सहित)
June 8, 2021 NepstokLeaveaComment on सधैं रुवाउँछन् कुशल बेल्बासे ले ,फेरि गाए शर्मिला गुरुङ संग यस्तो मार्मिक गीत (भिडियो सहित)
काठमाण्डौ – पछिल्लो समयका निकै चर्चित गायक कुसल बेलबासेको आवाज रहेको नयाँ गीत एकै रातले भर्खर मात्र सार्वजनिक भएको ।गीतमा शर्मिला गुरुङले आवाजमा साथ दिएकी छन । माया प्रेममा विछोड भएका प्रेमीहरुको कथालाई गीतले कलात्मक रुपमा गीतमा उतारेको छ ।बालकुमार श्रेष्ठको शब्द सिर्जना रहेको सो गीतलाई गायिका स्वयमले लय सिर्जना गरेकी छन । गीतको म्युजिक भिडियो भने राजन क्षेत्रीले निर्देशन गरेका छन । भिडियो हेर्नुहोस्
यो पनि समाचार:सडकमा दौडिरहेको छा’डा साँ’ढेले ८ करोड रुपैयाँको ला’गूऔ’षध समा’त्यो
काठमाडौं। सडकमा छा’डा दौडिइरहेको साँ’ढेले ८ करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको ला’गूऔष’ध ज’फत गर्न प्रहरीलाई ठूलो सहयोग गर्यो भन्दा हामीलाई अचम्म लाग्न सक्छ । तर, संयोगले एउटा साँ’ढेले यस्तो काम गरेको छ । साँ’ढेका कारण प्रह’रीले त’स्करको हातबाट ठूलो परिमाणमा अवै:ध ला’गूऔ’षध हेरो’इन प्रहरीको हा’तमा पु’र्याउन ठूलो सहयोग गरेको छ । घ’टना भारतको उत्तर प्रदेशको बरेलीको हो ।
भारतीय मिडियाका अनुसार बरेलीको दिल्ली–लखनउ हाइवेमा बिहानै त’स्करले नयाँ स्कार्पियो गाडीमा हे’रोइन राखेर लिएर जाँदै थिए । ती’ब्र गतिमा दौडिइरहेको गाडीको अगाडि एक्कासी साँ’ढे आयो । साँ’ढेसँग गाडी ठो’क्किने देखेपछि ड्राइभरले ह’तारह’तार गाडी घु’माए । यसरी एक्का’सी घुमाउँदा गा’डी उ’छिट्टियो र विप’रित दिशाबाट आइरहेको सेन्ट्रो कारसँग ठो’क्कियो । दु’र्घटनामा सेन्ट्रो कारमा सवार २ महिलासहित ४ जना घा’इते भए ।
घट’नापछि स्का’र्पियो चलाइरहेका युवक भने घट’नास्थलबाट फ’रार भए । घट’नाको सूचना पाएपछि पुगेका प्रभारी निरीक्षक विजय कुमारले सबै घा’इतेलाई बरेली अस्प’ताल पठाए । पुलिसले घ’टनाको जाँ’चको क्र’ममा गा’डीभित्र चे’कजाँ’च गर्दा गाडीमा राखिएको जगेडा टायर फुल्लिएको पाइयो । त्यसलाई खोलेर हेर्दा पुलि’स च’कित परे । त्यसमा ४ वटा प्याकेटमा राखिएको ४ किलो १०० ग्राम न’शा’लु पदा’र्थ भेटियो ।फरेन्सिक विशेषज्ञले जाँ’चपछि यो पदा’र्थ हे:रोइन भएको बताएका छन् । यसको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ५ करोड भारु अर्थात ८ करोड नेपाली रुपैयाँ पर्ने अनुमान गरिएको छ । पु’लिसले गाडीमा भेटिएका कागजपत्रका आधारमा तस्क’रहरु बब्लु, नाजिस र गाडीका मालिक राजनलाई पक्रा’उ गरेको छ । केही आ’रोपी फ’रार रहेको एसपी राजकुमार अग्रवालले बताए । उनीहरुको खोजी भइरहेको छ ।
भारतको सेनिटाइजर उत्पादक कम्पनीमा भी’षण आ’गला’गी: १४ जनाको मृ’त्यु
भगवानको लिला अपरम्पार-देख्ने बित्तिकै ॐ लेखि सेयर गरौँ,सात दिन भित्र चिताएको पुरा हुनेछ !
खुसीको खबर: भद्रगोलबाट चर्चा कमाएकि अभिनेत्री तथा मोडल रक्षा श्रेष्ठ आमा बन्दै !
May 27, 2021 May 27, 2021 Nepstok
April 30, 2021 Nepstok